Qoys soomaali ah oo loo hanjabay | Somaliska
Maxamed Dhamac iyo qoyskiisa waxaa ay ku nool yihiin cabsi iyo wel wel, ka dib markii dhalinyarro ugu hanjabtay ineey dilayaan, argagaxna ku rideen qoyskiisa.
Maxamed waa wiil dhalin yarro ah oo qoyskiisu ka kooban yahay labbo wiil oo dhalay iyo xaaskiisa. Weriye ka tirsan wargeyska Gothenburg Post oo la kulmay Maxamed iyo qoyskiisa oo ku jira marxalad wel wel ah,ayaa ka qoray warbixin dheer.
Maxamed oo u waramayey wargeeyska ayaa Gothenburg Post, ayaa sheegay in uu dalkaan yimid isaga iyo walaalkiis bilowgii sagaashameeyadii, ka dib markii dalkoodii hooyo ee Soomaaliya dagaalo ka qarxaan. Haatana uu markale ka qaxayo magaaladii uu ka helay deganaanta iyo nabad galayada. Wuxuu sidoo kale sheegay in lugu dhex dhuumaaleeysto dalka Iswiidhan gudaheeda ineey tahay mid waali ah oo aan la aqbali karin.
Maxamed waxa uu ku shaqeeya tarjumaan, wuxuuse kal hore ahaa dacwad qore ka shaqeeya xarrunta booliska ee gobolka Göteborg. Wuxuu tilmaamay dhalinyarada la degan xaafada Bergsjön ee bariga Göteborg in ay u heystaan nin ku dacweeyey booliska. Taasina ay ay keentay in cagta cagta u saaraan. Wuxuu ku sifeyeey dhalinyaradda argagaxa ku riday kuwo aan si qarsoodi laheyn wadooyinka ku iibiya maandooriye. Ma ahan oo keliya Maxamed Dhamac iyo qoyskiisa, waxa ay dhalinyaradaasi argagax geliyaan. Waxeey dhowr jeer dhibaateeyn dadka deegaanka, oo qaarkood albaabka boostada ka soo dhacdo loogu riday waxyaabo qarxa. Dadka deeganka waxaa ay bilaabeen ineey xaafado kale ka raadsadaan guryo.
Maxamed Dhamac oo ka faaloonaya isbadaladda cabsida leh ee ka jira xaafadda Bergsjön wuxuu ku tilmaamay sawir aan quruxsaneyn. Habeen habeenadda ka mid ah oo lugu soo weeraray gurigiisa ayuu farta ku fiiqay in dareen xoog leh ku reebay carruurtiisa. Kooxda booliska ee gacanta ku heeysa kiixska dacwada Maxamed waxaa ay sheegeen ineey xireen oo aan la sii baareyn, iyagoo sheegay in xaafadda Bergsjön ay ka jiraan dhalinyarro argagax gelisa dadka deegaanka.
Ugu dambeytiina Maxamed Dhamac wuu farta ku fiiqay iney suuqa Rymdtorget iyo xaafada Bergjön iney faraha ka baxeen, ayn adag tahay in lugu ku dhex noolaato bulsho aan dukaanka caano laga doonan karin cabsi awgeed. Wuxuu ku booriyey in dowlada, booliska iyo waalidiinta ay si wada jir ah wax uga qabtaan dhibaatada taagan.
walee xajada waa xumaatay illaahow naga qabo kuwaan calooshooda ayaa ku dhex noolnahaye wiilkan waa nin afkina garanaya sharciyadana garanaya hadana intaas dhibaato ah ayey marisiiyeen. poliska dadkan marki la dhinto miyeey dadka wax u qabanaya